News | AIM TREASURE
AIM TREASURE မှ စီစဉ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည့် “အဆောင်-၂ (အိပ်မက်နိဒါန်း)” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီမလိခစိုးထိုက်အောင်မှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းကို မယ်ခိုင်နှင့် ရွှေပြည့် တို့မှ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အကယ်ဒမီရဲအောင်၊...
AIM TREASURE မှ စီစဉ်ရိုက်ကူးသည့် အဆောင် – ၂ (အိပ်မက်နိဒါန်း) ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနား မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ
AIM TREASURE မှ စီစဉ်ရိုက်ကူးပြီး Fortune TV Channel (free-to-air) မှ ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် အဆောင် (၂) အိပ်မက်နိဒါန်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ကန်တော့ပေးပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၂.၉.၂၀၁၉)၊...
AIM TREASURE မှ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဆရာများအသင်း(MJA) သို့ အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားကို မေလ (၈) ရက်နေ့က AIM TREASURE တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ AIM TREASURE မှ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဆရာများအသင်း(MJA) သို့...
AIM TREASURE မှ စီစဉ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည့် “အဆောင်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီမလိခစိုးထိုက်အောင် မှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းကို မယ်ခိုင်၊ရွှေပြည့်နှင့် ဆုဩချယ်တို့မှ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ၂၀၁၉...
AIM TREASURE မှ စီစဉ်ရိုက်ကူးပြီး Fortune TV Channel (free-to-air)မှ လာမည့် မေ လတွင် ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် အဆောင် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ကန်တော့ပွဲအခမ်းအနားကို ၃၁.၁.၂၀၁၉ မနက်(၉)နာရီတွင်...